Mbola Mijery Ny Fiadiana Ny Amboara Eran-tany Amin’ny Lalao Baolina Kitra Avy Lavitra Indray I Però… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2014 2:39 GMT
Sarin'ny saina Peroviana ao anaty vahoaka nandritra ny lalao baolina kitra iray. Sary nalaina tao amin'ny Flickr an'i Teru Kaleru. CC BY-NC-ND 2.0.
Efa-taona aty aoriana, mbola miverina indray ny tantara. Mijery ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany amin'ny baolina kitra toy ny vahiny indray ny Peroviana, izay tsy manana ny ekipany manokana mandray anjara hotohanana.
Nahita Fiadiana Ny Amboara Eran-tany miisa valo io firenena io taorian'ilay iray farany nandraisany anjara – dia ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany amin'ny Baolina kitra nataon'ny FIFA tany Espaina tamin'ny 1982, 32 taona lasa izay.
Niezaka nitady ny anton'io trangan-javatra io ny blaogy CappoCanonieri noforonin'i Fernando Serra, mpianatra mandalina ny Serasera:
Mety ho avy [ireo mpanazatra fanta-daza] Bielsa, Guardiola, Gareca na koa ireo mpanazatra maro hafa mahay, saingy malahelo aho milaza aminareo fa tsy handeha na aiza na aiza izahay. Fantatrareo ny antony? Noho ny zavatra izay efa nolazaiko tanatin'ireo andalana voalohany amin'ity lahatsoratra ity. Maimaika loatra izahay amin'ny fanaovana ny zava-drehetra. Fiarahamonina zatra manao hadalàna izahay ary mitady izay làlana akaiky indrindra mba hanatratrarana ny tanjonay […] Toy izay ny zava-miseho amin'ny baolina kitra Peroviana. Alika matin'ny hanoanana izahay ka mitady rano maloto fotsiny mba hanalàna ny hetahetanay.
Nandray lantom-peo maneso kokoa i ¿Perú al Mundial? (Però eo amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany?) anatin'ny fanazavany ny zava-mitranga:
Tsy ny baolina kitra no fanatanjahantena maneran-tany resahan'ny olona rehetra. Misy toerana eto ambonin'ny tany tsy mahalala mihitsy ny fisian'io fanatanjahantena io, ary tsy manao azy io, tsy fantany ny fitsipika sy ny fomba filalaovana azy: Però no anaran'io toerana io… Ny zana-tany ao amin'io firenena io dia manana ny fanaony manokana ialàna voly, saingy zavatra iray tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana tongotra. Fitambaran'ny hazakazaka 100-metatra sy ny four per jonca izy io [kesika iray misy tavoahanginà labiera enina]. Fantatra amin'ny anarana hoe Fulbo izy io ary mora mihitsy ny manafangaro azy amin'ny fitsipika tena izy an'ny lalao baolina kitra. Kanefa mibaribary ny fahasamihafan'ireo zavatra roa ireo rehefa dinihina lalina. Ho an'ilay voalohany, izay ekipa manana isa betsaka amin'ny fitifirana anatin'ny tsatokazo no mandresy; ary ho an'ity farany kosa, izay mahavita mandrora betsaka indrindra no mandresy. […] Raha tsy mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra iadiana ny amboara eran-tany i Però, dia satria tsy te hanao tsotra izao izy.
“Mba avelao aho hijery an'i Pero ao Rosia amin'ny taona 2018″. Sary nalaina tao amin'ny Twitter an'i @terra.pe.
Nandritra izany fotoana izany, tsy very finoana ny blaogy PPGOL-ILO tao amin'ny lahatsoratra navoaka ny andro fankalazàna ny fetin'ny Ray:
[…] ankehitriny maro ny antony ankalazànay azy io araka ny tokony ho izy, any an-trano miaraka amin'ny fianakaviana, eo am-pihinanana sakafo matsiro sady mihiaka isaky ny misy mahafaty baolina maro mandritry ny lalao iadiana ny Amboara Eran-tany atao ao Brezila; lalao iray lehibe izay jeren'i Però fotsiny ao anaty fahitalavitra, miaraka amin'ny fanantenana fa mbola hanatrika mivantana izany indray andro any…
Volana vitsivitsy lasa izay, ny vohikala El Bocón dia nanoratra momba ny fotoana nitarihanà mpanazatra roa nahomby tamin'ny fitantanana ekipa mandray anjara amin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany ny ekipa Peroviana, izay nahitana vokatra hafa mihitsy:
Mpanazatra roa avy any ivelany izay nandalo tao Però taona maro lasa izay no eo amin'ny kianjan'ny lalao baolina kitra maneran-tany. Araka izany, nanao izay nahalany an'i Costa Rica amin'ny fiadiana ny Amboara Eran-tany any Brezila i Jorge Luis Pinto raha eo an-dàlam-panaovana izany miaraka amin'i Chile kosa i Jorge Sampaoli; mitovy ny fomba fiadin'izy ireo, misy fepetra iray tsy maintsy arahina: dia ny fitsipika izany, fa raha tsy misy an'io, dia tsy ho tonga na aiza na aiza mihitsy isika.
Nametra-panontaniana ihany koa ny olona tao amin'ny Twitter momba ny tsy nahateo an'i Però, ny sasany tamin'ny fomba matotra noho ny hafa:
Ary nandresy an'i Chile i Però tamin'ny herintaona… Mazava ho azy fa ny antony tsy nandraisanay anjara tamin'ny lalao iadiana ny Amboara Eran-tany dia ny mba tsy hanalanay baraka ny ambony.
Ireo mpanazatra izay niasa tao Però dia nahomby tamin'ny Fiadiana ny Amboara Eran-tany. Mieritreritra aho fa ny ahatongavan'izy ireo ao Però dia ny hianatra izay rehetra tsy tokony hatao.
Ny Amboara Eran-tany farany azon'i Però dia efa talohan'i Kristy.
Avy aty lavitra indray, aoka ny mahery no handresy!